कस्तो अचम्म ! ९ बर्षमै प्रहरी बनेका भाइको दुनियाँ चकित पार्ने प्रतिभा, यस्तोसम्म गर्न सक्छन, सोच्नै नसकिने प्रतिभा – Sanjal Nepal
Homeसमाचारकस्तो अचम्म ! ९ बर्षमै प्रहरी बनेका भाइको दुनियाँ चकित पार्ने प्रतिभा, यस्तोसम्म गर्न सक्छन, सोच्नै नसकिने प्रतिभा
November 22, 2020 admin समाचार 2743
काठमाडौ । तपाईले भर्खरै प्रहरी पोशाकमा आए के गर्नुहुन्छ होला ? यसो सोच्नुस त । हो आज हामी तपाईलाई यस्तै सानै उमेरमा प्रहरीको पोशाकमा टिकटक हल्लाएका भाईको बारे कुरा गर्दैछौ ।
उनको नाम हो पृथ्बी जंग आले मगर, जो बल्ल अहिले ९ बर्षमा लागेका छन । अचम्मको कुरा त के छ भने यिनले गर्ने सबै टिकटक भिडियोहरुमा नेपाल प्रहरीको मात्र पोशाकहरु लगाएका हुन्छन र अहिलेसम्म प्रहरीबाट पनि त्यस्तो कुनै नोटिस नआएको बताउछन यिनी ।
देख्दा क्युछ र लजालु देखिने पृथ्बी टिकटकमा भने आफनो बाबाको कारण आएको बताउछन र आफनो लगाब पनि दिन प्रतिदिन यसैमा बढदै गईरहेको पनि बताए ।
प्रहरी बनेका भनेर धेरै मिडियामा पनि भाईरल भए तर उनी त्यति सानै उमेरमा कसरी प्रहरी बन्न सक्थे होला र ? भन्ने सबैको सोच पनि आयो र नभन्दै उतm ड्रेस पनि सुटिङको लागि लिएको रहेछ ।
सानै उमेरका प्रहरीको बर्दी लगाउन पाएका पृथ्बीको लक्ष्य भने ठूलो भएसी प्रहरी बन्नेनै रहेछ त्यसैले उनी यस पोशाकमा सजधजका साथ अभिनय गर्दा रहेछन । अहिलेको जमानामा टिकटकले धेरैलाई यसरी
अभिनयमा प्रेरित पनि गरिरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन पृथ्बी हेर्नुस यिनको चकित पार्ने प्रतिभा —**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
April 9, 2021 admin समाचार 404
हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं
November 3, 2020 admin समाचार 6196
काठमाडौ । जवान अवस्थाको एक मात्र छोराको असामयिक निधन भएपछि अहिले काठमाडौँको टोखा नगरपालिका –५ धापासीमा बस्दै आएका आशिष मगरका आमाबुवाको बेहाल भएको छ । उनको साथीहरुले नै ज्यान लिएको खुलेको छ । घटनामा संलग्न
November 28, 2020 admin समाचार 1838